Hapana chakasununguka muhupenyu | Linux Vakapindwa muropa
edumix | | Updated on 15/10/2013 14:32 | Linux vs. Windows
Ruzhinji ruri kushamisika (uye pamwe iwe uri paPC yako) Linux inogona sei kusununguka mune ingangoita meseji? Kana Linux yakanaka uye Windows yakaipa kwazvo, nei imwe iri yemahara uye imwe ichikudhurira ruoko nehafu?
Vamwe vanoti: Hapana chakasununguka muhupenyu, asi zvakadii nezveLinux uye yemahara software mune zvese. Ndezvekuti vese vari kumusoro here kana kuti ivo giles uye havabhadharise mateki izvo zvii?
Sezvo ini ndichizviona semurombo, pandinoenda kushopamaketi kana kuenda chero kunotenga chero chinhu, ndinotarisa pane zvese zvingasarudzwa uye kazhinji nguva dzose zvinyoronyoro kubvisa zvakachipa pane zvakarongwa: yakachipa sosi, yakachipa mp3, chikafu chemutengo wakachipa katsi. Iwe unotoziva kuti uri kutora njodzi uye kuti zvinowanzoitika kuti tiri kukanda mari mumarara emarara.
Asi yemahara software inoita kunge isinga shande neparadigm iyi, zvinoshamisa, nekuti yakavhurika sosi zvirongwa uye GNU / Linux zvinoita kunge zvemhando yepamusoro. ¿Ndeupi musiyano yakakosha kana paine?
Mune maonero angu mutsauko uripo uye ndichaenda kunotsanangura kuti izvi zvinoshanda sei sekuzvinzwisisa kwandinoita:
Iyo yakasarudzika bhizinesi scheme (tenga yakaderera uye tengesa yakakwira) uye ayo akasiyana akapararira zvakanyanya zvekuti tinofungidzira kuti hapana imwe nzira yekutengesa.
Iyo Linux programmer haitsvage iyo inokurumidza kubhadharwa yekutenga nekutengesa, zvirinani nenzira yakapusa yakadaro. Pane kudaro, tsvaga kuzivikanwa uye / kana kugona kutsigira.
Ndizvozvo, anotipa software uye anotitendera kuti tishandure, asi anotengesa ruzivo rwake kwatiri uye kana tikarigamuchira tinogona kubhadhara rubatsiro rwake.
Vamwe vanotsvaga kuzivikanwa, ndiko kuti, kuzviita vanozivikanwa nesoftware inoshamisa uye kuti munhu wese anoziva kuti musiki ndiani.
Nekudaro, mune dzakawanda zviitiko, programmers vane basa rakatsiga uye vanoshandirwa nekambani X vatanga zvirongwa munzvimbo yakavhurika sosi kuti vawane kuzivikanwa kwevezera ravo uye, wadii, kubatsira vamwe.
Asi ko zvakadii nezvezvirongwa zvikuru?
Panguva ino, uye kana ivo vakanzwisisa chimwe chinhu, ivo vanenge vari kubvunza kuti makuru mapurojekiti anoshanda sei. Mhosva mbiri.
Ubuntu: Inotangira kubhadharwa nenjodzi yekuSouth Africa inonzi Maka Shuttlework Maka Shuttleworth. Ubuntu ichangobva kuzvipira kubatsira kumakambani nevanhu vamwe nevamwe, kwavanobhadharisa kubva pamadhora mazana maviri nemakumi mashanu kusvika pamadhora mazana maviri nemazana manomwe nemakumi mashanu, tisingatauri kuti vane zvavo chirangaridzo shopu (Ndiri kunakidzwa neiyo ubuntu mug).
Firefox (Mozilla): Ichi chirongwa chakakosha zvine chekuita nemari. Izvo zvakazvarwa apo kodhi yanhasi yakanyangarika yakaburitswa «Netscape Navigator«. Nhasi dzinotsigirwa nemari zvakanyanya nemari yekushambadzira inobhadharwa neGoogle (Kana iwe ukaona injini yekutsvaga kumusoro kurudyi kweFirefox yako paunoona "G" yanga isina mahara). 85% yemari yavo inouya kubva pairi.
Chimwe chinhu: Basa rekutora chikamu
Nyasha huru kwazvo yeakavhurika sosi haisi yekuti ndeye mahara, nekuti izvo hazvivimbise chero chinhu uye zvakare iri nharo yekuzvifunga. Nyasha huru kwazvo yeakavhurika sosi ndeyekuti chero munhu anogona kushandira pamwe, ndosaka mapurojekiti mazhinji akakura achirarama uye mazhinji akavhurwa sosi mapurojekiti anogara pasina chero mushandi.
Vanopfuura mumwe akataura (zvakabatana neLinux uye komunizimu / socialism) kuti kuvandudzwa kweLinux hakugone kuve pasina kuvapo kwesimba reChina, Russia nedzimwe nyika dzenyika dzechiKomonisiti dzinofungidzirwa kuti dzinoripa mari. Uye hongu, haina kunyepa kudaro, kuvandudzwa kwenzvimbo yakavhurika munyika idzodzo kunokurudzirwa zvakanyanya nevatungamiriri vemasimba avo vanoona nekumwe kutya kusanganiswa nepropathiary software inogadzirwa nemupikisi mukuru wavanaye.Ko kana rimwe zuva Windows isina inogona kutengeswa munyika yemakomunisti?
Asi zvirokwazvo hapana chakasununguka muhupenyu nekuti paive pasina mubvunzo mumwe munhu kumashure akatambisa nguva yake ... ikozvino zvandinofunga nezvazvo nenzira imwecheteyo muLXA! kanavanofunga kuti LXA! yakanga yakasununguka kwatiri? Zvino, kubhadhara, iri € 1 kuverenga uye € 5 kuti utaure.
(Ndatenda leandrowsy yekukurudzira musoro wenyaya!)
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Linux vs. Windows » Hapana chakasununguka muhupenyu
Mupiro wakanaka kwazvo!
Izvi zvinojekesa kusahadzika kune vazhinji vasinganzwisise zvekutanga zvekusimudzira linux, yemahara software uye yakavhurika sosi.
mupata usina akadaro
Zvese zvinhu chaizvo chaizvo kunze kwechikamu chaunosanganisa linux necommunism, izvo zvatove zvakanyatsorambidzwa nhema nhema yehukama pakati pecommunism uye mahara software
Mhoro !!!, kunyangwe ivo vari kutanga, vazviita netsoka yekurudyi, saka, ini ndinovaisa sekurudziro yangu yezuva reBlog.
Anofara Blog zuva! Kwazisai;)
Kutenda nekuziva basa remazuva mashoma, chaizvo uye kuzvidzora padivi, iri rakabudirira kwazvo blog munguva shoma kupfuura yandakaona uye ndinofara kutora chikamu mune izvi.
Mhoroi, iwo mubvunzo wandakanga ndabvunza ndewekuti ndiani akachengetedza maseva kubva uko zvirongwa zvinotorwa muUbuntu? Mushure mekuverenga iyo posvo ndinofanira kufunga kuti mari yacho inobva kunaMark Shuttlework neCanonical mari chete?
Panyaya yepositi, zvinogona here kunzi zvaive "zvakasikwa" zvemahara software kuti ibude? Sezvo chigadzirwa chakakura uye chakakosha semapurogiramu uye MaSystem Anoshanda / anofanirwa / kuve munzvimbo yeruzhinji? ndevevanhu vasina zvirambidzo?
Pindura kune Leandrowsy
Chokwadi chaive chekuti zvese zvainge zvichifamba mushe kusvika iwe wabatanidza Linux nehukama, hapana chekuita nazvo.
Kune avo vasina kuzviziva, makambani makuru senge IBM kana SUN vari kuchinja kwavo bhizinesi chiratidzo kubva pakutengesa zvigadzirwa kuenda mukutengesa masevhisi, kusiyana neMicrosoft inonamira pakutengesa zvigadzirwa (zvakaipa kwazvo nenzira)
Mumakundano ainopa, Venezuela, Cuba neChina zvinotaurwa, pane vatatu chete China yakagadzira vhezheni inonakidza yeLinux uye iyo senzira yekuwana dura rakakura kubva kuMicrosoft uye kuwana kodhi yekodhi.
Sezvo ini ndati: hapana chekuona.
Chinyorwa chidiki: zita rekupedzisira raMark Shuttleworth, kwete Kufambisa basa.
Uku kupenga: D
Pindura kuna Woow